Macallin Ole Gunnar Solskjaer oo xaqiijiyey dhaawaca mid ka mid ah xiddigaha Kooxda Manchester United – Gool FM
Haaruun July 25, 2021
(Manchester) 25 Luulyo 2021. Ka hor xilli ciyaareedka cusub ee 2021-22 Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ogaatay in uu ka dhaawacmay mid ak mid ah xiddigaheeda.
Macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa xaqiijiyey in xiddiga dadabka bidix ee reer Brazil, Alex Telles uu soo gaaray dhaawac dhanka canqowga ah.
Tababaraha Man United waxa uu sheegay in 28-sano jirkaan uu garoomada ka maqnaan doono dhowr isbuuc kaddib markii dhibaatadaas dhaawac uu ku soo gaaray tababarka.
Alex Telles ayaa dhaawacaas soo gaaray waxa uu sababay inuu qeyb ka noqon waayo safka kooxdiisa ee ka qeyb galay kulankii saaxiibtinnimo ee ay guuldarrada 4-2 kala kulmeen shalay naadiga Queens Park Rangers.
“Nasiib-darro Alex wuu sidbaday, wuxuuna ay wax yeello ka gaartay canqowgiisa, sidaas darteed waxa uu maqnaan doonaa dhowr toddobaad, waxaan rajaynaynaa inuusan dhaawac sidaa u xun ahayn.” ayuu yiri Tababare Ole Gunnar oo MUTV uga warammayey xaaladda Alex Telles.
Man United ayaa kaddib guuldarradii ay shalay kala kulantay QPR waxa ay saddex kulan oo kale oo saaxiibtinnimo ah la kala ciyaari doontaa Brentford, Preston iyo Everton, ka hor inta uusan si rasmi ah u furmin xilli ciyaareedka cusub.
Intaas kaddibna waxa ay Kooxda Manchester United kulankeeda furitaanka horyaalka Premier League xilli ciyaareedka 2021-22 waxa au 14-ka bisha Agoosto la ciyaari doontaa Naadiga Leeds United.